Soomaalida UK oo cabasho ka ah Hanjabaad loo diray. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Soomaalida UK oo cabasho ka ah Hanjabaad loo diray.
Soomaalida UK oo cabasho ka ah Hanjabaad loo diray.
Soomaalida kunool UK ayaa sheegay in ay soo gaareen Fariimo hanjabaad ah oo uga imaanaya Dad ka xun dilka loo geystay Xildhibaan David Amess oo dilkiisa loo xiray Wiil Asal ahaan Soomaali ah sida ay xaqiijiyeen Hay’adaha ammaanka Britain.
Mas’uuliyiin katirsan Dowladda ayaa sheegay in ay wax ka qabanayaan dadka Hanjabaadda u diraya Bulshada Soomaaliyeed taas oo keenni karta naceyb loo qaado Ajaanibta gaar ahaan Soomaalida.
Jaaliyadda Soomaalida Ingiriiska ayaa sheegtay in tiro kamid ah Muwaadiniinta Soomaaliyeed ay soo gaartay hanjabaad qaarkood lagu wargeliyay in loo dili doonno sabab la xiriirta Cali Xarbi Cali oo ku eedeysan dilka Xildhibaan David Amess.
Kaahiye Cilmi oo ah Afhayeenka Guddiga ay ku mideysan yihiin Jaaliyadda Soomaalida UK oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Dowladda ay u gudbiyeen wax ka qabashada Caga-jugleynta lagu hayo Muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in ka jaaliyad ahaan ay ka falceliyeen dilka loo geystay Xildhibaankaan isla markaana ay muujiyeen in muwaadinta ku eedeysan falkaan lagula xisaabtamo wixii mas’uuliyad ah oo ka yimaada waxa uu sameeyay.
“Warbaahinta ayaa nagu bidhaameysa Dadka Hanjabaya, Dadka waddankaan degen waxa ay fiirinayaan Magaca Soomaaliya oo ma eegayaan kan British, Dadka neceb ee Ajaanibta gaar ahaan Muslimiinta ayaa bilaabay in ay direen Waraaqo Hanjabaad ah, waxaana la xiray Xafiisyada qaar si looga feejignaado sheekadaan socota” ayuu yiri Kaahiye Cilmi.
Previous articleUN ramps up response to help drought-hit Somalis
Next articleMaxay tahay sababta Cali Maxamed Cali uu ugu haray tartanka doorashada Aqalka sare ee Jubbaland?